जो गीत गाएरै खानेपानी र सरसफाइको चेतना छर्छन् - Wash Khabar
जो गीत गाएरै खानेपानी र सरसफाइको चेतना छर्छन्
१७ असार २०७५, आईतवार १०:५१ 703 पटक हेरिएको
उहाँलाई गीत गाउन लेखिरहनु पर्दैन । संगीत पनि अनिवार्य छैन । न कण्ठ नै गर्नुपर्छ । आफै रचनाकार आफै गायककार, त्यो पनि तत्काल मनमै कोरिन्छन् गीतका शब्द । जस्तो परिवेश त्यस्तै किसिमको गीत क्षणभरमै तयार पारेर गाईहाल्ने उहाँको विशेषता हो । उहाँले झण्डै चालीस बर्ष विताईसक्नुभएको छ गीत गाएरै । उमेरले ६० टेक्नै लागेका, गीतको माध्यमबाट सामाजिक चेतना भर्दै आउनुभएका उहाँ हुनुहुन्छ मुगुका कल्से नेपाली ।
खानेपानी, सरसफाइ र जनस्वास्थ्य लगायत सामाजिक बिषयवस्तुलाई टपक्क टिपेर गीत गाउने नेपालीले गीतबाटै समस्या पहिचान गरिदिने र सुल्झाउने उपाय पनि देखाइदिनुहुन्छ ।
उहाँको गीतले सामाजिक आवश्यकता दर्शाउँछ, गाउँले मिलर नै समाधानको प्रयास पनि गर्नुपर्छ भन्ने बोध गराउँछ र समाधानको उपाय गीतबाटै सुझाएको हुन्छ ।
समाजलाई दिशा निर्देश गर्ने खालका उहाँका गीतहरु मुगुको गमगढीमा स्थापना भएका रेडियोहरुमा नबजेको दिनै हुँदैन । जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले समेत उहाँलाई उचित पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर सामाजिक सचेतनाका छोटा गीतहरु गाउन लगाएर रेडियोबाट प्रसारण गर्छन् ।
रेडियोमा बज्ने ऋतु अनुसार आउन सक्ने समस्या, विपद र सावधानीका सन्देशहरु प्रायः उहाँकै आवाजमा हुन्छन् । हिउँदको समयमा हावाहुरी चल्ने भएकाले आगलागी हुनसक्ने र त्यसबाट बच्ने उपाय गीतबाटै प्रसारण भइरहेको हुन्छ भने बर्षायाममा लाग्न सक्ने रोग, पानीको शुद्धिकरण जस्ता विषय पनि उहाँको गीतमै अटेका हुन्छन् ।
रेडियोमा मात्र बज्ने कल्से नेपालीको गीत हामीले प्रत्यक्ष सुन्ने अवसर पायौं । गमगढी बजारबाट ओरालो झर्दै गर्दा नेपाली सँग हाम्रो भेट भयो । एक हातमा लौरो, अर्को हातमा श्रीमतीको हात समातेर हिड्दै गरेका नेपालीलाई हामीले गीत गाउन आग्रह गर्यौं ।
जस्ताको तस्तै छ, जस्ताको तस्तै छ, मुगु जिल्ला खन्यापानी
ठाउँ ठाउँमा बस्दैछ, गरिबी निमुखा जनताहरु
हम्बो खन्यापानी कहिले सुध्रिने होला
पाइप छियो धारो नाई, धारो भए पाइप पाईदैन
सिद्धि त गाह्रो नाई मुगालीले पानी खान हुन्
उहाँले साँच्चिकै मुगालीले भोगिरहेको खानेपानीको साझा समस्या दर्शाउनुभयो । खोलाको पानी बोकेर खानुपर्ने, पाइप भए पानी नहुने, पानीको धारो भए पानी नझर्ने समस्या छ मुगुमा ।
उहाँको गीत सुनेर कति समाधान भयो यो भएन , आफ्नै ठाउँमा छ । पानी शुद्धिकरण गरेर मात्र पिउन आग्रह गर्नुभयो । गीत सुनेर कतिले पानी शुद्धिकरण गर्ने तरिका थाहा पाए ? अनि कतिले शुद्धिकरण गरेर पिउन थाले ? यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।
मुगु खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ । मुगुको खुला दिसामुक्त अभियानमा धेरैले आ आफ्नै तरिकाले योगदान दिएका छन् । कसैले तालिम, गोष्ठी चलाए, कतिले कर्मचारी नै परिचालन गरेर चर्पी बनाउन लगाए । तर सरसफाइ अभियानमा कल्से नेपालीले गीतको माध्यमबाट पुर्याएको योगदान पनि चानचुने छैन ।
टोइलेट चर्पी लाउ, मुगाली बजारका मान्ठाहरु हो
त्यत्ति मात्रै राहु जिल्ला मुगुबाट फोगड
गीतको माध्यमबाट सामाजिक चेतना प्रवाह गर्न कहिल्यै नथाकेका कल्से नेपालीलाई सलाम । दृष्टिविहीन नेपालीले दृश्यमा कस्तो भयो भनेर हेर्न देख्न नपाए पनि गीतको माध्यमबाट समाजमा चेतना भर्न सफल भएको सुन्न चाहनुहुन्छ ।
‘मलाई थाहा छ, यहाँको समस्या यस्तो छ । र त म गीत मार्फत भनिरहेको हुन्छु । तर परिवर्तन भएछ भने पनि म देख्न सक्दिन । मेरो आँखाले देख्न नसकेपनि गाउँमा परिवर्तन भएको सुन्न चाहन्छु र यस्तै गीतहरु गाइरहन्छु ।’ नेपालीले भन्नुभयो ।
वास तालिम अधिकृतमा जागीर
महिनावारी स्वच्छता दिवस मनाउन
खानेपानी मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा वास प्लान बनाउन सहयोग गर्ने
पोखरामा एक टोल एक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने
रानीमहलको बृहत सरसफाइ
मेलम्ची टुक्र्याएर ठेक्का लगाइने